डा अमृत जैशीसँग भिडियो वार्ता: बिपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारी बर्खास्तीको माग राख्नुको कारण के हो? :: रिता लम्साल :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
डा अमृत जैशीसँग भिडियो वार्ता: बिपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारी बर्खास्तीको माग राख्नुको कारण के हो?
रिता लम्साल बिहीबार, असोज १४, २०७८, ०७:३८:००
काठमाडौं– बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा एक सयभन्दा बढी दिनदेखी आन्दोलन भइरहेको छ। प्रतिष्ठानका शिक्षक तथा कर्मचारी, विद्यार्थी लगायत सरोकारवालाहरुले प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियान नै चलाएका छन्। उनीहरु असार १ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
प्रतिष्ठानका विकृति विसंगतीको सुधारको माग राखेका उनीहरुले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको बखास्र्तीको माग समेत राख्दै आएका छन्।
प्रतिष्ठानमा चलिरहेको आन्दोलनमा सक्रिय रुपमा सहभागीमध्ये एक हुन डा अमृत जैशी। उनले प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियानको सुरुवाती १५ दिनसम्म प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको राजिनामा माग नगरेको बताए।
आफूहरुको मुख्य माग प्रतिष्ठानमा खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितता छानबिन गरी आर्थिक पारदर्शीता कायम हुनुपर्ने, प्रतिष्ठान तथा अस्पतालको सेवा सुधार, सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने, शैक्षिक अवस्थामा गुणस्तर ल्याउनुपर्ने लगायतका माग राखिएको डा जेशीले जानकारी दिए।
स्वास्थ्यखबरसँगको भिडियो कुराकानीका क्रममा उनले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु प्रतिष्ठानको सुधार र गुणस्तरिय सेवाका माग पूरा गर्न नै बाधक बनेपछि आफूहरुले पदाधिकारीको राजिनामाको माग गर्न थालेको बताए।
उनले प्रतिष्ठानमा अहिले भएका पदाधिकारी परिवर्तन भएर मात्र प्रतिष्ठानको सुधार नहुने पनि बताए। प्रतिष्ठानको सुधारका लागि राजनीतिक नियुक्तीको आधारमा मात्र भन्दापनि विज्ञहरुको सुझाबका आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिए।
भिडियो वार्तामा उनले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई कमाइखाने भाँडो बनाउन नहुने र यो क्षेत्रमा राजनीतिकरण हुन नहुने उनको तर्क छ।
डा जोशीसँग प्रतिष्ठानमा भइरहेको आन्दोलन, आन्दोलनरत पक्षका माग, सरकारसँग माग पुरा गर्ने क्रममा भएका सहमति लगायतका विषयमा स्वास्थ्यखबरकी रिता लम्सालले कुराकानी गरेकी छिन्।
हेरौं उनीसँगको भिडियो वार्ता